RW ku xigeenka oo kulan la yeeshay mas’uuliyiinta bahda saxaafada-Sawirro – Radio Muqdisho
Guddiga heer qaran ee loo xirsaaray qabanqaabada xuska maalmaha xorriyadda ee 26-ka Juun iyo 1da luuliyo, ayaa maanta kula kulmay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha warbaahinta madaxa banaan iyo tan dowladda, waxana ay ka wada hadleen sidii wadajir looga wada shaqayn lahaa dabaal daga maalmahan xoriyadda.
Wasiirka Warfaafinta Maxamed Cabdi Xayi “Maareeye”, oo ah gudoomiyaha gudiga farsamada Xafladda kulanka ka hadlay ayaa sheegay in warbaahinta qeybaheeda kala duwan looga baahan yahay in door muuqda ka ciyaaraan xuska maalmaha xoriyadda, isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in bulshada Soomaaliyeed maskaxdooda laga dhaadhicyo qiimaha ay leedahay xoriyadda.
“Maalmaha Xoriyadda waxay bulshada Soomaaliyeed uga duwan yihiin, waa maalmihii ay ka xoroobeen gumaystaha, waxaa laga doonayaa saxaafaddu in ay door muuqda ku yeelato baraarujinta shacabka iyo barista qiimaha xoriyaddu ay leedahay” ayuu yiri Wasiir Maareeye.
R/Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda F. Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte oo ah gudoomiyaha gudigga heer qaran ee qaban qaabada xuska 26, June iyo 1 Luuliyo ayaa u sheegay madaxda warbaahinta in laga doonayo door muuqda in ay ka qaataan horumarinta dalkooda. Wuxuuna sidoo kale ku dhiirigeliyay warbaahinta waddaniga ah iney kaalin wax ku ool ah ka qaataan wacyigelinta bulshada, nabadda iyo hirgelinta nidaamka dowlanimo.
“Waxaa fooda nagu soo haya maalmihii xoriyadda dalkeena, kuwaas oo muhiim u ah qaranka Soomaaliyeed, waxaan ka doonaynaa warbaahinta madaxda banaan iyo tan dowladda inay door ku yeeshaan sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa muhiimadda xoriyaddu leedahay”ayuu yiri ra’isulwasaare ku xigeenka dalka.
Guddigan heerka qaran ee uu Ra’iisul Wasaaruhu u magcaabay qabanqaabada xuska munaasabadaha maalmaha xorriyadda Soomaaliya, ayaa shaqadiisu tahay in uu qaban qaabiyo xuska, xiriiriyo hay’adaha ku hawlan xuska maalmaha qaran iyo in ay ka hawl-galaan sugidda amniga iyo habsami-u-socodka munaasabadaha xorriyadda.